pyimyanmar journal - swesone media group | အားကစားသတင်း
SweSone Media Group ပင်မစာမျက်နှာ
ရုပ်ရှင် အနပညာရှင် သတင်း
ပြည်မြန်မာ ဂျာနယ် Good Health ဂျာနယ် The Chic မဂ္ဂဇင်း သုတစွယ်စုံ မဂ္ဂဇင်း အာရောဂျံ မဂ္ဂဇင်း Myanmar Font အားကစားသတင်း
ရီးရဲလ် နှင့် PSG ဘောလုံးပွဲစဉ် တွင် အိပ်ပျော်နေသော တရုတ် ရုပ်သံ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူ အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ် အတွင်း က ဘာနေဗြူး ကွင်း ၌ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သည့် ဥရော ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် တစ်ပွဲ ဖြစ်သည့် နာမည်ကျော် စပိန် ကလပ် ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်း နှင့် ပြင်သစ် ကလပ် ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း PSG အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားနေစဉ် ...
Read more... ၂၀၁၉ ဖီဖာ ယူ ၁၇ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေဟု ဦးဇော်ဇော် ပြော ကမ္ဘာ့ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဖီဖာက နှစ်နှစ် တစ်ကြိမ် ကျင်းပလျက် ရှိနေသည့် အသက် ၁၇ နှစ် အောက် ဖီဖာ ယူ ၁၇ ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကို မြန်မာနိုင်ငံ က အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပသွားနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ....
Read more... လက်ဝှေ့ ပွဲများ ကို ပြန်လည် မိတ်ဆက်သည့် အနေဖြင့် ပုဂံတွင် ရိုးရာ လက်ဝှေ့ Free Show ပွဲ ကျင်းပမည် မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့ ပညာရပ်များ စတင်ပေါ်ထွန်းရာ ပုဂံဒေသတွင် ရိုးရာ လက်ဝှေ့ ပွဲများ ကို ပြန်လည်မိတ်ဆက် သည့် အနေဖြင့် လာမည့် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက် တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့တွင် ရိုးရာလက်ဝှေ့ Free Show ပွဲကြီး ကို ....
Read more... ယူ ၁၉ အာရှဖလား ခြေစစ်ပွဲ ကို MRTV က တိုက်ရိုက် ပြသသွားမည် မြန်မာနိုင်ငံ က အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပသွားမည့် ယူ ၁၉ အာရှဖလား ခြေစစ်ပွဲစဉ်များကို မြန်မာ တစ်နိုင်ငံ လုံး ရှိ ပရိသတ်များ ကြည့်ရှုအားပေးသွားနိုင်ရန် MRTV မှ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြသသွား မည် ဖြစ်သည့် အပြင် Read more... အီတလီ ဘောလုံးလောကတွင် အစိမ်းရောင် ကတ်ကို ဒိုင်များ အသုံးပြုတော့မည် အီတလီ စီးရီးဘီ ပြိုင်ပွဲများ ၌ ဘောလုံးသမား များ ၏ အပြုအမူကောင်းများကို အားပေးပြီး ညစ်ပတ်ခြင်း မရှိစေရန် အစိမ်းရောင်ကတ်ကို ဒိုင်များက စတင် အသုံးပြုတော့မည် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
Read more... ၂၀၁၆ အိမ်ရှင် ဆူဇူကီး ဖလား ပြိုင်ပွဲ အတွက် အောင်ဆန်းကွင်း ကို အကြီးစား ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည် လာမည့် ၂၀၁၆ ဆူဇူကီး ဖလားပြိုင်ပွဲ ကို မြန်မာနိုင်ငံ က အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲ ကို ရန်ကုန်မြို့ တွင်သာ ကျင်းပသွားရန် စီစဉ် ထားသောကြောင့် အောင်ဆန်းကွင်း ကို ...
Read more... MMA မြန်မာပြည် ရွှေခါးပတ် ချန်ပီယံ နှစ်ဦးကို နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲများ တွင် ထိုးသတ်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးသွားမည်ဟု ဆို ကိုယ်ခံပညာ ပေါင်းစုံသုံး MMA လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲ မှ မြန်မာပြည် ရွှေခါးပတ်ချန်ပီယံ ရရှိထား သော သပြေညို နှင့် သွေးသစ်အောင် တို့ ကို နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲများ တွင် ၀င်ရောက် ထိုးသတ်သွားနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ....
Read more... ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ နှင့် နိုင်ငံတကာ ခြေစမ်းပွဲများ အတွက် လက်ရွေးစင် အသင်းကြီးကို ယခုလ ဒုတိယ အပတ် တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမည် ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ဒုတိယ အဆင့် ခြေစစ်ပွဲ လက်ကျန်ပွဲစဉ်များ နှင့် နိုင်ငံတကာ ခြေစမ်းပွဲ တို့ အတွက် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အသင်းကြီးကို ယခုလ ဒုတိယ အပတ် တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ...
Read more... ပြင်ဆင်ချိန် နည်းသော်လည်း ယူ ၁၉ အာရှ ဖလား ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်ရန် မျှော်မှန်းထားဟု ဂတ်ဆီဇီ ပြော ၂၀၁၆ အာရှ ယူ ၁၉ ချန်ပီယံ ရှစ် ခြေစစ်ပွဲ အတွက် ပြီးခဲ့သော ရက်ပိုင်း က မှ မြန်မာ ယူ ၁၉ အသင်းကို စုဖွဲ့လေ့ကျင့် မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရပြီး ပြင်ဆင်ချိန် နည်းသော်လည်း ခြေစစ်ပွဲ အောင်မြင်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း ယူ ၁၉ အသင်း နည်းပြချုပ် ဂတ်ဆီဇီ က ၂၅-၇-၂၀၁၅ ရက်တွင် ပြောသည်
Read more... စောငမန်း ၊ ထွန်းထွန်းမင်း ၊ တူးတူးတို့ ပါဝင်သော နိုင်ငံတကာ ရိုးရာ လက်ဝှေ့ စိန်ခေါ်ပွဲ ကျင်းပမည် မြန်မာ့ရိုးရာ ထိပ်တန်း လက်ဝှေ့ သမားများ အားလုံးပါဝင်သော နိုင်ငံတကာ ရိုးရာ လက်ဝှေ့ စိန်ခေါ်ပွဲကို လာမည့် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ဖြူ အားကစား ရုံ ၌ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၂၅-၇-၂၀၁၅ ရက်က သိရသည်
Read more... < Previous 12
Copyright © Swesone Media Group. All rights reserved.
Developed by MWP ( myanmar web professional ). database